माग्दिन म माफी ऋषिपञ्चमी पूजामा - Deshko News Deshko News माग्दिन म माफी ऋषिपञ्चमी पूजामा - Deshko News
दर खाने दिन र हरितालिका तीज बाल्यकाल देखि नै रमाइलो लाग्ने दिनहरुमा पर्थे।
पहिलो कारण चाहिँ एकैचोटी ३ दिन स्कुल बिदा हुने, दोस्रो चाहिँ दर खाने दिन ठुलोममी को छोराको जन्मदिन र तिजको दिन चाहिँ आफ्नो ठुलोमामाको जन्मदिन अनि तेस्रो कारण चाहिँ दर खाने दिन हजुरआमाले दरको खिर भन्दै खिर खुवाउने र जताततै आमा, दिदि बहिनीहरु सबैजना मग्न भएर नाच गाना गर्दै रमाउने।
अहिले सम्झंदा हाँसो लाग्छ । ऋषिपञ्चमी पूजाको मेरो पहिलो अनुभबको बेला जब गुरुले, “महिनावारी हुँदा मेरो तर्फबाट जानेर-नजानेर भएको गल्ती, पाप, को लागि म माफी माग्दछु” भन्नु भने तब यो खुट्टाको औंला देखि शिर सम्म सिरिंग पो भएँ म ।
तर पूजा गरेन भने घरमा बहुत टेनसन! ममीको पूरै इमोसनल बल्याकमेल सुरु भइ हाल्ने र मलाई पनि लाग्यो यो पूजाको परिभाषा नै पनि त बदल्न सकिएला नि ! त्यहि भएर केहि वर्ष यता ऋषिपञ्चमी पूजा माफी माग्न होइन धन्यवाद भन्नलाई गर्न थालें।
हामीले अहिलेको जमाना पनि आएर ‘छुई-छुई’ भनेर मान्ने हो? पहिले पहिले हजुरआमाको पालामा महिनावारी भएको बेला उचित व्यवस्थापन गर्न अहिले हामी सँग भएका जस्तो केहि सामग्री थिएन न जनचेतना नै थियो ।
धोतीको केहि भागले रजस्वलाको रगत थाम्ने अनि धारामा सोहि धोती धोएर पुनः प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो रे हाम्रो हजुरआमाले पनि ! अहिले त धेरै सुधार भएको छ, विकट क्षेत्रमा सुधार हुने क्रममा छ, त्यहि पनि यो मान्ने ?
उता हजुरआमाले भने हाम्रो कुरा सुनिसके पछि, ‘त्यसो भए चल्दै आएको परम्परा नमान्ने’? भन्दै अँध्यारो मुख बनाउनु भयो! मैले आमाको घुंडामा हात राखि भनें, ‘होइन आमा ! परम्परा मान्ने हो तर वर्षौं देखि अन्धविश्वासमा चलिआएको कुरालाई हामीले बुझेर पनि निरन्तरता दिए त हामी नै पापी हुन्छौं !